ရွှေထူးက လက်ဦးပြီး ကလေး အဖေ အရင်ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ X-Box
Myanmar Celebrity 16 gün önce
"သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်နိုင်ငံလုံး သိကြတဲ့ Celebrity တွေပါ။ ဒီလို အောင်မြင်မှုတွေကိုတောင် မမှုဘဲ အချစ်အတွက် ဦးစားပေးကြတဲ့ အတွက် သူတို့နှစ်ယောက် ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားပါတယ်။ ကျနော်က ရွှေထူး ထက် အသက်ပိုကြီးပေမယ့် သူက လက်ဦးပြီး ကလေးအဖေ အရင်ဖြစ်မှာပါ" လို့ ရွှေထူး နဲ့ ရွှေမှုံ အတွက် Congratulate လုပ်လိုက်တဲ့ အဆိုတော် X-Box နှင့် ခဏတာ။
Myanmar Celebrity Update: Singer X-Box congratulate Shwe Htoo & Shwe Mhone #XBox #ShweHtoo #ShweMhoneYati
X-Box Myanmar Singer Myanmar Hip Hop Myanmar Celebrity
wah pu11 gün önce
Aung Ko13 gün önce
လပြည့် စိန်14 gün önce
ko saw14 gün önce
မှန်​တယ်​ သူတို့ကချစ်​သူရည်းစားပဲ လက်​မှတ်​ထိုးပြီးလက်​ထပ်​ထားတဲ့လင်​မယား​တွေ​တောင်​ကွဲကြ​သေးတာပဲ တ​ယောက်​နဲ့ကွဲ​နောက်​တ​ယောက်​နဲ့တွဲတာ ဒါလူ့သဘာဝပဲမဟုတ်​လား? စဉ်းစားပြီး​ဝေဖန်​ပါ ပရိသတ်​​တွေ လက်​ခုပ်​ဆိုတာတစ်​ဖက်​တည်းတီးမရဘူး ဒို့က​တော့ ​ကို​ရွှေထူးသီချင်းကိုအား​ပေးတာ ​ရွှေမှုံသရုပ်​​ဆောင်​​ကောင်းလို့ကြိုက်​တာ အား​ပေးတာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်​​ရေးရာဇဝင်​ကိုအား​ပေးတာမဟုတ်​ဘူး .... တစ်​ခု​တော့​ပြောပါရ​စေရှင့်​ ရည်းစားဖြစ်​တ်ိုင်းသူက ´ငါ့ရဲ့"အိမ်​​ထောင်​ဖက်​လို့သတ်​မှတ်​မရဘူးဆိုတာ​ပေါ့ဆိုတဲ့
zin mar15 gün önce
pmk imp15 gün önce
X box စကားပြောတာလေး ချစ်ဆာ
nant grace16 gün önce
ဝေဖန်းနေတဲ့သူက ဘာကောင်မို့လို့လဲ သူများကိစ္စ ကိုရွှေထူးတို့ကို ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေ ငါ့လခွီးတွေပဲ
Aung Kyi16 gün önce
Hello ! X. bOX , i DON'T KNOW WHO ARE YOU ? But you are also without Morallity which may be Committed by Shwe Htoo .
U tintlwin4716 gün önce
ဘယ်သူဘာပြောပြော သူတို့လုပ်ချင်တာတကယ်လုပ်သွားတာဘဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...ထာဝရ အမြဲလက်တွဲလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့...
อา ก้า16 gün önce
Kenneth Huang16 gün önce
cha lan16 gün önce
ထင်သားဘဲ ကလေးမက အဲ့လိုဖြစ်နေပီတဲ့
myomyo aye16 gün önce
Ladoh Htoo16 gün önce
smile love16 gün önce
နန်းခင်လွတ်လပ် ဆော် Open Open Mee16 gün önce
နိုင်ငံခြားနဲ့ လိုက်မရှင်နဲ့ နိုင်ငံခြား မင်းသား မင်းသမီး ချီးစားတဲ့အလုပ်လုပ်ရင် မင်းတို့လဲ ချီးစားတဲ့ အလုပ်လိုက်လုပ်နိုင်မလား ချီးစား ဦးနှောက်နဲ့ လိုက်မပြေားနဲ့ နိုင်ငံခြားက မင်းသား မင်းသမီးတွေက သစ္စာရှိတယ် သစ္စာမဖောက်ဘူး မကြိုက်ရင် ဒဲ့ ကွဲဒါ မလိမ်ဘူး
Laurie Smith16 gün önce
ချီးမွန်း ၇က် ကဲ့ရစ်၇က် ဒါပေမဲ့ နာမည်ကတော့ တစ်သက်လုံးပြက် ၄နှစ် ၅နှစ် ထက်မကျော်နိုင်ပါဘူး သစ္စာမရှိရင် ဘယ်အရာမှ မခိုင်မြဲနိုင်ဘူး နှစ်ယောက်စလုံးက သစ္စာမရှိတဲ့အတွက် နောက်လဲ ဖောက်နေအုံးမှာပဲ
myint myat12 gün önce
အမှန်​ပဲ တစ်​​ယောက်​က ခြံခုန်​ကျင့်​ရှိတဲ့နွား တစ်​​ယောက်​ကလဲ နှိုက်​​ကျော်​ရတာ ၀ါသနာ တူ​တွေ
Moe Wai Moe Wai16 gün önce
ပြေားသားပဲ ဗိုက်ထွက်သွားလို့ ယူလိုက်ကြတာ
တိုးတိုး​ပြော သူတ်ု့ပိတ်​သတ်​​တွေ ဖင်​၀င်​နာ​နေမယ်​
SS&P Recipes16 gün önce
Saw Nwe Thein16 gün önce
Naw May16 gün önce
Thar Thar16 gün önce
မှန်​တာ​ပေါ့ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ကိုယ်​ပိုင်​​ရွေးချယ်​ပိုင်​ခွင့်​ရှိတယ်​👍👍
Ni Lar Win16 gün önce
လခွမ်း X Box တဲ့အဆို​တော်​လားဟ ကြား​တောင်​မကြားဖူးဘူး
wana aung16 gün önce
မင်းတို့အ​မေနဲ့အိပ်​​နေတာ ​စောက်​သုံးမကျတဲ့​ကောင်​​တွေသီချင်း တန်​ရာတန်​ရာပဲနား​ထောင်​ကြတာကိုး
wana aung15 gün önce
X Boxကိုတောင်မသိတာ ဘယ်မှာသွားသေနေလဲမသိတာ
Ju Naing15 gün önce
Shwe Htoo တောင် သိတာ မကြာသေးဘူး....နာမည်ကျော်အဆိုတော်ဆိုတာ.....😜😜😜😜
John Rongcawi16 gün önce
Mam Htet Yan16 gün önce
Sai Myat16 gün önce
Ma San16 gün önce
Hein Pyae Oo16 gün önce
ဇွန်ပန်း လေး16 gün önce
Khin Marhtwe No16 gün önce
ကွီးxboxမယူနဲ့အုံးချစ်​လို့​တောင်​ဝ​သေးဘူး♥ ♥ ♥ ♥
Chit Su Kyaw16 gün önce
Sai Koko16 gün önce
"ရုတ်တရက် မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး"-ရွှေထူး+ရွှေမှုံရတီ
ချစ်တဲ့ မျက်လုံးလေးနဲ့ ကြည့်ပေးပါ ဆိုတဲ့ ရွှေ နှစ် ရွှေ ရဲ့ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေး
ချစ်သူ က မုန့်ခွံ့ကျွေးပြီး အမေက ထမင်းခွံ့ကျွေးတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေမှုံ
ရွှေမှုံရတီကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အားပေးလာတာ ဆိုတဲ့ ရွှေထူး
ရွှေမှုန်ရတီ ရဲ့ မင်္ဂလာ သတင်းအပေါ် ဆရာ ဖြစ်သူ နေတိုး ဘာပြောလဲ?
ရွှေမှုံ က Body လှတယ်.. ညီမက ကိတ်တယ် ဆိုတဲ့ ငွေမှုံရတီ
နေတိုး ရဲ့ ညီမလေး အဖြစ် စတင် သရုပ်ဆောင်မယ့် လေပြေသွေး
ကိုယ် ဝလာတာက ယောက်ျားဖြစ်သူ မကောင်းလို့ပါ ဆိုတဲ့ အိတုံ
Shwe Htoo & Shwe Hmone Yati .Signing Day,ထူးအယ်လ်လင်း ၊မီမီခဲ - မင်း
ပုပ္ပါးရိုက်ကွင်းမှာ မန်းကျည်းသီး ခူးပြီး၊ ဟင်းချက်စားတဲ့ ယွန်းရွှေရည်
ထိုင်းမင်းသမီးလေး Davikah နဲ့ရွှေမှုန်တို့ အလှချင်းပြိုင်တဲ့ပွဲ
မီရုပ်ရှင် နဲ့ ဆင်ဆာကိစ္စ။ ပြသနာ။
ယောင်တတ်တာကြောင့် ကား ခဏခဏ တိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျော်ထူး
မင်္ဂလာပွဲမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျကြတဲ့ ရွှေနှစ်ရွှေ
အရမ်းချစ်မိသွားလို့ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတော့မယ့် ရွှေထူး၊ ရွှေမှုန်ရတီ
အိမ်ထောင်ဖက်ကို ကလေးပဲ မွေးခိုင်းမယ် ဆိုတဲ့ ရွှေထူး - Shwe Htoo Relationship
နေတာ (၁၂) နှစ်လောက် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဂန္တဝင် ရဲ့ ချစ်စရာ အိမ်ကလေး
"ဧည့်သည်" ရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်းမှ သရုပ်ဆောင် ရွှေထူး၊ ရွှေမှုံရတီ၊ နေခြည်ဦး
အဝေးသင် တတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ တက်ရောက်နေတဲ့ ဝေလာရီ